Miezaha ho tia tena momba ny tambajotra tsy mitady fitia | Martech Zone
Miezaha ho tia tena momba ny tambajotra tsy misy fitiavan-tena
Zoma, Febroary 12, 2010 Alahady 9 Febroary 2014 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity aho dia nanana resadresaka henjana niaraka tamin'ny orinasa sasany izay tena tiako. Fantatr'izy ireo fa miahy aho satria noraisiko tamin'ny asany izy ireo ary ampamoahiko izy ireo. Ny tamba-jotra no fampiasam-bolako ary aiza no ahazoako ny tombony be indrindra amin'ny fampiasam-bola.
Ireo orinasan-teknolojia iarahako miasa dia mahazo antoka amiko foana. I foana mitory olana, hevitra ary kudos amin'ny ekipany. Ho an'ny olona rehetra izay mimenomenona, misy olona an-jatony hafa handao anao tsotra izao ary hahita mpivarotra hafa. Zava-dehibe fa, raha miahy ireo mpamatsy vahaolana anao ianao, dia manana resaka sarotra amin'izy ireo amin'ny zavatra tsy nety na ny antony.
Misy fitaovana sy vondrom-piarahamonina maromaro misy ahy. Mampientanentana sy mandreraka ny tambajotra. Amin'ny maha-orinasa kely ahy, ny tambajotrako no lakilen'ny fahombiazako. Izay manodidina ahy dia taratry ny asako ary mitondra orinasa koa. Ny sasany amin'ireo tambajotranoko dia tsy tia tena - manao izay tsara rehetra vitany mba hanosehana ny fandraharahana ho eo am-pofoako. Mahatsiaro manana trosa aho ary manararaotra mamerina ny fankasitrahana foana. Tia tena anefa ny sasany ary mandrefy ny fifandraisanay amin'ny zavatra nomeko azy ireo fotsiny.
Mamoaka harato goavambe ny media sosialy. Manombatombana foana aho hoe aiza no tokony hitenenako manaraka, na tokony handoa izany sa tsia, na tokony haka ny ora sy ny vola amin'ny fandaharam-potoako mba ho eo. Mandinika ireo sehatra hanoratako sy hampiroboroboako aho. Mieritreritra momba ny fanaovana bilaogy mifanohitra amin'ny podcasting amin'ny podcasting aho. Mieritreritra ny haneho hevitra amin'ny tranonkala hafa aho ary hifandray amin'ireo mpitarika indostrialy. Asa be io.
Amin'ny maha mpanolo-tsaina ahy dia kely dia kely ny 'vola miditra miverimberina', noho izany ny ankamaroan'ny vola miditra amiko dia miangona amin'ny fivarotana ny fotoako. Midika izany fa ny kapoaky ny kafe, antso an-taroby na mailaka ataoko dia mamaly ahy sao very vola.
liana: Hatraiza ny fahombiazantsika raha toa ka mila mifandoa vola isaky ny fivoriana ataontsika isika. Raha miantso anao aho hisotro kafe, ahoana raha tsy maintsy mandoa ny tahan'ny adiny iray aho. Mbola hiantso anao hisotro kafe ve aho?
Zava-dehibe ny fanombatombananao amin'ny tambajotram-pifandraisana tsy tapaka mba hahalalanao hoe aiza no ampanjarianao vola na handoa na tsia. Orinasa raharaham-barotra, mazava ho azy. Miezaha ho tia mitady tambajotra tsy misy fitiavan-tena. Tsy hahomby aho raha tsy noho ny mpanjifako lehibe - famintinana, ChaCha, Webtrends ary Fampahalalana Walker dia ao anatin'io lisitra io. Amin'ny "lakile" dia fidiram-bola no tiako holazaina;).
Rehefa mieritreritra ireo fifandraisana ireo sy ny fivoarany aho dia nivoatra avy tamin'ny fifandraisako tamina mpandraharaha tokana - Chris Baggott. Ianareo izay mahalala ahy sy Chris dia mahalala fa mifanaja tanteraka izahay - ary samy milaza ny marina tokoa isika. Chris dia evanjelisitra lany tamingana - manosika mafy hanao izay hampisongadinana ireo orinasany… izay mety hiseho ho tia tena. Rehefa mijery ny fahombiazako sy ny lisitry ny mpanjifako aho, dia nivoatra tamin'ny fifandraisako tamin'i Chris nandritra ny taona maro.
Avy aiza no ahitanao mpanjifa? Avy aiza no ahitanao ny tanjonao amin'ny orinasanao? Iza no tokony hanananao ny fahombiazanao? Mamaly ny fankasitrahana ve ianao? Mety ho gaga ianao rehefa hitanao ilay izy.
Fanamarihana farany: Ity lahatsoratra ity dia tsy natao hamaivanina ireo olona hafa izay tena manakiana ny fahombiazan'ny orinasako sy ny fivoarany. Fantatrao hoe iza ianao! Ny tiako holazaina dia ny manome hazavana kely fa ny sasany amintsika dia tsy manombatombana sy manome lanja ireo olona ao amin'ny tamba-jotra ho an'ny tena asa omen'izy ireo. Mieritreritra aho fa noraisiko ho zava-dehibe ny fifandraisako amin'i Chris ary tsy fantatro hoe zava-dehibe tamiko izy.